Vatariri In Europe On A Budget Tips | Save A Train
musha > Rovedza Kufamba Matipi > Vatariri In Europe On A Budget Tips
Kufamba mu Europe iri bhajeti kwakaoma! zvisinei, zvinokwanisika chero tsvakurudza yako ronga rwendo yako nokuchenjera. Zvingakushamisa sei zvakawanda unogona kuponesa achitora rworudyi kwadzinoita chokufambisa kana kusarudza isingadhuri dzokugara. isu kuvimba; pane bhajeti-ushamwari zvinotsiva pazvose pamwe rwendo rwenyu - kubva zvinokwezva kuti kuvaendesa chikafu kuti pokugara.
yeuka, vafambi ari bhajeti havasi "murombo:"Vari savvy! Saka usati Ndiende kuzvinzwira tsitsi, funga pamusoro yose mari Muchaponesa vachiri kuita zvinoshamisa Ndangariro. bhajeti yenyu ishoma uye anokosha; saka, unofanira kubata nayo nokungwarira. Heano yedu pamusoro mazano nokuti vaifamba mu Europe iri bhajeti:
Vanofungireiko Route Your
Vaka avaiita yako pamberi zvimwe. Hapana fungidziro, une mazita anofanira-shanyira European dzokugara. Chaizvoizvo, haukwanisi kushanyira vose paaifamba mu Europe iri bhajeti, kunyanya kana nguva yako iri sezvo zvishoma sezvo bhajeti yenyu. Saka pane kusunda kuvaona vose, tora pamusoro wako maviri kana matatu. Zvino tarisa mepu kuona kana maguta uri muchifunga zviri nyore kubatanidza kuti, uye chii mamwe maguta vari pamwe kuti nzira.
Semuyenzaniso, iwe vangafarira kushanyira Paris uye Amsterdam. Ongorora nzira, uye imi muchaona kuti kweBrussels ndiro guta riri pakati maviri! nokusarudza Maguta batanidza, kana izvo zviri pakati pezviviri nzvimbo dzekurota, unogona kuwana mamwe Bang nokuda yembudzi yenyu.
Iwe kuwana zvakanakisisa prices kana iwe kuchengetera yako hotera kana hostel dzimba pachine. The kwokutanga, nani. Sarudza ako pokugara zvakachenjera.
Nepo Inn pa 5-nyeredzi Hotels kureva nyaradzo kwakakwana uye umbozha, havasi ivo vakachenjera sarudzo kana kubata zvakasimba bhajeti. Uyezve, kugara ari zvinodhura hotera kamuri raizova dongo mari yako, ainyanya kana urongwa yako kunosanganisira dzinoyevedza uye kuongorora guta. Zvinoreva unenge chete kuti kushandisa nzvimbo ava uye kupedza dzakawanda mazuva ako uye pamusoro.
Kana uchida kuchengetedza, unogona kugara munharaunda mahara nokushanyira mutsa exchanges. Other chipa pokugara zvinosanganisira hostels kuti chipo dhomitari-mhanya zvivako. Room Rentals ari paIndaneti mumisika yakadai Airbnb zvakare yakanaka kufamba mu Europe iri bhajeti.
Idya Kufanana Local paaifamba mu Europe iri bhajeti
Gastronomic zvinofadza vari kwose kwose muEurope. Asi kana uri kufamba mu Europe iri bhajeti, chinhu chakangwara kuita kudzivisa kudya kunzvimbo dzinodhura dzevashanyi. Usarega resitorendi mabhiri kuputsa zvokudya zvako bhajeti.
pachinzvimbo, udye sezvinoita munharaunda uye kuwana chaicho tsika ruzivo. Food zvidyiro zvamabhiza uye chikafu mumugwagwa vose pamusoro pamaguta European, uye ivo ndivo hotspots vakakwana kutenga zvechokwadi chili. Uye zvakanakisisa ndechokuti vachava chete kudhura euros shoma. Kana uchida kuchengetedza pamusoro kudya, yakarova ndibhadhare mari muchitoro. Kana uri kugara mumba kuti anokwanisa kubika, kutenga zvokubikisa mundiro unogona nyore kuita.
Kurara pamusoro Train
Sleeping muchitima pakati dzokugara zvichida mumwe wedu kufarira mazano kuvanhu vaifamba mu Europe iri bhajeti. Pane kupambadza anokosha chemasikati maawa dzaifanoiswa, sarudza kuenda imwe chitima husiku. Zvingakushamisa sei zvikuru isingadhuri zviri pane Mugshot kuhotera usiku. chokwadi, uchaita kusuwa girl, asi iwe unenge muka zvakanaka akazorora muguta idzva!
Ready to start traveling in Europe on a budget and bhuku chitima? Book chitima matikiti mangwanani uye kuwana zvakanakisisa zveefa pazvigaro!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei kadhi rine Link kuti ichi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftraveling-europe-budget%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
#bhajeti #traveleurope budgettravel cheaptravel Chengetedza mari